Akwukwo Igbo: Akwukwo ndi mmadu na-aru ndi ahia ahia di ahia
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka a na-elebara anya na ya. Ha na-eme ka ha ghara ịzụ ahịa ahịa zuru ezu n'ịzụ ahịa zuru ezu, na-eme ka ọ bụrụ na ị na-elebara ndị ọzọ anya nke ọma.
Igor Gamanenko, responsible for successor dei clienti di Ọkachamara , kwadoro ndị mmadụ na-abịa na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka azụmahịa na e-commerce e sfruttare al meglio la tua attività - mysql query analyzer linkedin.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ị na-eche na ị nwere ike ị na-eche na ị na-eche na ị chọrọ ka ị na-eche na ị ga-achọ ka ị na-eche na ị na-eche na ị na-elebara anya. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ị na-enweta na prodotto che avevano na-enweta na passato? Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-ahụ ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eche banyere ihe ọ bụla, ị na-eche echiche dị ka ihe ọmụma nke elettronico azụmahịa. Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ha na-achụ ihe ọ bụla.
The statistiche dimostrano che ci sono numerosi grandi vantaggi della personalizzazione del commercio elettronico. Ọ na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka onye ọ bụla n'ime ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla. La maggior parte degli nwere ike na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enwe 45% ha maggiori ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ike elettronico
Na-eme ka azụmahịa gị na-arụ ọrụ nke ọma. Ecco alcuni dei modi più comuni per passare le raccomandazioni di acquío tuoi clienti:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla na-eme ya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ele anya na ọ bụrụ na ọ bụghị onye ọ bụla na-achọpụta na ọ bụrụ na ọ na-achọpụta ihe ọ bụla na nke onye ọ bụla, ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-elekọta mmadụ ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla, (c)
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-enweta ozi ngwa ngwa na ngwa ngwa ahịa azụmahịa, ị ga-eme ka ị na-eme ihe. Ihe ọ bụla nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-edepụta aha.
3. Segmentazione del nchekwa data
Ị nwere ike ịdebanye aha gị na elettronica akwụkwọ ozi na-eme ka ị na-eme ka a na-edebanye aha na-eme ka ị na-elebanye anya na-elebara anya na elettronica na isi ala. Nke a na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ụbọchị ha, bụ nke a na-enweta n'oge gara aga na nke ikpeazụ.
4. Onye ọ bụla na-echere
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ị na-achọpụta na ị na-achọpụta na ị na-eche na ị na-eme ka oge na-aga. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga -
E-mail con linee personalizzate personalizzate ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-ede ozi. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe dị iche iche, ị nwere ike ịmepụta ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe. Ndị mmadụ na-eme ka ha nwee ike ime ka ha nwee ike ịbanye na onye ọ bụla na-akwado ya ma ọ bụ na-akwado ya. Ọ kwadoro na-eme ka onye ọ bụla mara mma. Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-eleta anya, na-eme ka onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka azụmahịa na-adịghị mma.
Nke a na-eme ka azụmahịa nke azụmahịa na ndị ọzọ na-eme ka a na-enye gị ego, messaggistica contestuale e remarketing dinamico. Nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe n'ụzọ dị irè na model na-eji ya. Ị nwere ike ịjụ ajụjụ banyere complesso. Nke a na-eme ka onye ọ bụla na-azụ ahịa na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-agbanwe ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa nke azụmahịa na azụmahịa, ị ga-achọpụta na ọ bụ onye ahịa na-eme ka ndị ahịa na-eme ka ha na-eme ka ha na-eme ka a na-eme ka ha na-eme ihe. Ọ dị mkpa ricordare che na personalizzazione ha un lato difettoso - onye personalizazione dei difetti provoca raccomandazioni sbagliate. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-emerịrị ya.